Tantara: Sora-tanana teo Amin’ny Rindrina - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
I Belsazara, zaﬁkelin’i Nebokadnezara, no mpanjaka tamin’izay. Niantso mafy izy mba hampiditra ny olon-kendriny. ‘Izay afaka mamaky io soratra io ary mahalaza ny heviny amiko’, hoy ny mpanjaka, ‘dia homena fanomezana maro ary hatao mpanapaka fahatelo lehibe indrindra ao amin’ny fanjakana.’ Nefa tsy nisy tamin’ireo olon-kendry afaka namaky ny soratra teo amin’ny rindrina, na nanambara ny heviny.
Nahare ny tabataba ny renin’ny mpanjaka ka tonga tao amin’ny eﬁtrano ﬁsakafoana lehibe. ‘Aza dia raiki-tahotra loatra’, hoy izy tamin’ny mpanjaka. ‘Misy lehilahy iray ao amin’ny fanjakanao izay mahafantatra ireo andriamanitra masina. Fony i Nebokadnezara raibenao mpanjaka dia nanendry azy ho ﬁlohan’ny olon-kendriny rehetra izy. Daniela no anarany. Ampanalao izy, fa hanambara aminao ny hevitr’izao rehetra izao.’
Raha mbola teo am-pitenenana i Daniela, dia efa nanomboka nanaﬁka an’i Babylona sahady ny Medianina sy ny Persanina. Namabo ny tanàna izy ireo ary namono an’i Belsazara. Tanteraka tamin’io alina io ihany ny soratanana teo amin’ny rindrina! Nefa inona izao no hitranga amin’ny Israelita? Ho hitantsika tsy ho ela izany, nefa aoka aloha hojerentsika izay nitranga tamin’i Daniela.
Vakio ny Daniela 5:1-31.
Antitranterina ao amin’ny Daniela toko faha-5 fa i Jehovah no manana ny zo hitondra izao rehetra izao. Hazavao. (Dan. 4:17, 25; 5:21)